FreeOffice inogadziridza uye inomanikidza kuenda kuOpenOfice | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice inogadziridza uye inomanikidza kuenda kuOpenOfice
Upenyu hwa free software (Chaizvoizvo, software padanho rezvose) yakaoma uye makwikwi akaoma, uye apo mamwe mapurojekiti ari kufamba zvakanaka, vamwe vari kuyedza kurarama nepese pavanogona kunyangwe vanga vari bhenji renguva yese. Uye saka zvakadaro OpenOffice yave kuda kufa, mukwikwidzi wako LibreOffice iri mune hutano hwakanaka uye maawa mashoma apfuura vhezheni nyowani yakasvika nenhamba yakakura yekuvandudzwa uye kugadzirisa, izvo zvinopa chimiro kune LibreOffice 5.2.1.
Iyo vhezheni inounza nhau kumativi ese, se Italo Vignoli (kubva kuThe Gwaro Foundation) inoratidza kuti ndiye akapa chiziviso chepamutemo. pane iyo blog blog, zvinoenderana nekutanga kwe Chiitiko cheLibOCon muBrno (Czech Republic). Zvese izvi chingori mwedzi mushure meiyo vhezheni 5.2 kusvika izvo, rangarira, zvakange zvaziviswa nemufaro mukuru nekuda kweakawanda ayo matsva, chimwe chinhu chinodzokororwa izvozvi uye icho hachisi chinhu kunze kwekuratidza kwakajeka kwebasa rakanaka kwazvo iro vavaki varo vanga vachiuya pamberi.
Kuti, FreeOffice 5.2.1 inosvika nenhau dzese Uye sekukurudzirwa neTDF, iri vhezheni yakanangana nevanofarira matekinoroji matsva, avo vanogara vachitsvaga kuve pakati pekutanga kuziva uye kuyedza zvigadzirwa zvitsva. Kune makambani uye vashandisi ayo akavakirwa paLibreOffice yenzvimbo dzekugadzira, zviri nyore kugara muLibreOffice 5.1.5, mushure mezvose, iyo vhezheni ine rutsigiro rwehunyanzvi uye kunodzidziswa uye zvitupa.
Ivo vanoshuvira kuyedza ese maBhaibheri anogona kuzviita, nekuti LibreOffice 5.2.1 inogona kuiswa padhuze nebazi re 5.1.x, asi haugone kumhanya zvese panguva imwe chete. Pakupedzisira, taura kuti unogona tora LibreOffice 5.2.1 kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti, ichititungamira kune chiteshi 'Nyowani' yeiyo quintessential yemahara hofisi suite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice inogadziridza uye inomanikidza kuenda kuOpenOfice
Zvakanaka, muUbuntu 16.04 iyi vhezheni haina kundikodzera kwazvo, kunze kwekuwedzera isingaonekwe menyu bar kumusoro (kunze kweinooneka kubva kubatana) inoratidza mafaera akashata akagadzirwa neshanduro yapfuura achiwedzera asipo peji mabhureki, achirovera , kwete kuvhara mushe zvakatomboita uye kuyedza kudzoreredza mafaera akanyatso chengetwa usati wabuda ... ini ndaifanirwa kudzikisira ku5.1.5 uye kubvisa ppa zvinyorwa apo ndakamirira kuti vhezheni itsva ibude
Chimwe chinhu chandisingazive, asi kana iwe ukawana yechipiri bhaa, zvinoita sekunge unayo ne gtk2, isa gtk3 rutsigiro uye izvo zvakagadziriswa. Kwaziso uye hupenyu hwakareba.
Ini handizive kuti nharaunda inobvumidza sei hwaro hwechokwadi, hwakakura uye "novel" shanduko kune yayo inozivikanwa LibreOffice kuti inyangarike, nekuti isu hatifanire kufuratira chokwadi chekuti yaive yekutenda kuCode yakapihwa kubva kuLotus Symphony kune iyo Apache Nheyo iyo IT «aikwanisa kupa iyo suite iyo yakamirirwa kwenguva refu kumeso kune imwe nhanho. Padanho rehunyanzvi, ine zvakawanda maficha zvinoita kuti iwedzere kushanda uye kuvimbika kupfuura LO, macro kurekodha semuenzaniso, kune nyowani inyowani huru ... kuenderana kwemafaira pakati peshanduro dzekutanga nedzakazotevera kwakanaka, chimwe chinhu chinenge hazvigoneke kuzadzikiswa neLO pasina magwaro asina kunyatsogadziriswa… .. muchidimbu, panofanirwa kuve neshanduko yenharaunda yekuvandudza Apache OpenOffice, chidimbu cheetekinoroji inoshanda, yakagadzikana uye yakavimbika kune vese vashandisi vepamba nevemabhizinesi.
Pindura kuna Nedka
Uye hapana munhu anoda WPS ??? Zvirinani kupfuura ivo vaviri pamwechete ...
Ini ndinoshandisa, parizvino haina kundipa matambudziko uye kuti ichiri alpha
Ini ndinoda WPS uye panguva imwechete ini ndinoshandisa LO 5.2
Ndine Shanduro: 5.2.0.4 yakaiswa paUbuntu 16.04 uye ini handina dambudziko.
Debian inoburitsa yakanyanya kuchengetedzeka yekuvandudza mumakore